प्रचण्डलाई भारतीय इशारामा चलेको भन्दै थाइल्याण्ड उडेका ओली उपचार गर्न नभएर भातीय गुप्तचर भेट्न गएको खुलासा ! - www.sahayatra.com प्रचण्डलाई भारतीय इशारामा चलेको भन्दै थाइल्याण्ड उडेका ओली उपचार गर्न नभएर भातीय गुप्तचर भेट्न गएको खुलासा ! - www.sahayatra.com
Home > patrapatrika > प्रचण्डलाई भारतीय इशारामा चलेको भन्दै थाइल्याण्ड उडेका ओली उपचार गर्न नभएर भातीय गुप्तचर भेट्न गएको खुलासा !
काठमाडौँ, १७ भदौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गएको बिहिवार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक पुगेका छन्, स्वास्थ्य उपचार गराउने बाहानामा । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट बैंकक जाने बेलामा ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना गरे ।
स्रोतका अनुसार भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्न र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध योजना बनाउनका लागि ओलीकै पहलमा बैंकक भ्रमण तय भएको हो । पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचर संस्था रअले दक्षिण एसियाको समस्या समाधानका लागि थाइल्याण्डमा छलफलको केन्द्र बनाउने गरेको छ ।
अघिल्लो माघमा पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि बैंककमै कुराकानी भएको थियो । रअका प्रमुख राजिन्दर खन्ना पनि यसै हप्ता थाइल्याण्ड पुगेका छन् । उनले थाइल्याण्ड बसाइमा ओलीसँग नेपाल मामिलामा छलफल गर्नेछन । जनआह्वान साप्ताहिकबाट
Item Reviewed: प्रचण्डलाई भारतीय इशारामा चलेको भन्दै थाइल्याण्ड उडेका ओली उपचार गर्न नभएर भातीय गुप्तचर भेट्न गएको खुलासा ! Rating:5Reviewed By: Shesh Narayan Jha